EJIDELA NWANYỊ TINYERE NWA AFỌ ISII N’IGBE NJUOYI – hoo!haa!!
Legọs: Na Legos, ndị uwe ojii ejidela Oriaku Patience Odowo, onye e nwetere ozu nwa onye agbata obi ya bụ Treasure Akinsohun, onye nke dị afọ isii n’ime igbe njuoyi (freezer) dị na be ya bụ nke e ji ere mmiri oyi na mmanya.
DSP Bala Elkana, ọnụ na-ekwuru ndị uwe ojii na steeti ahụ kọwara na n’ebe elekere asatọ n’ọkara ụnyahụ, otu nwanyị aha ya bụ Eunice Akinsohun bi na Oyedele Street, Alapere ketu bịara kpesara ha na nwa ya nwoke, Treasure onye nke dị afọ isii na-efu efu kemgbe elekere itoolu ụtụtụ ụbọchị ahụ.
Ọ sịrị na a hụzịrị ozu nwatakịrị ahụ n’ime igbe nju oyi Patience Odowl bụ onye agbata obi nwanyị a.
Ozi anyị nwetara bụ na Treasure n’ụmụaka ibe ya nọ na-egwuri egwu na mbara tupu achọwa ya achọ.
Nwanyị a e nwetara ozu nwatakịrị a n’ime igbe njuoyi ya enwebeghị ihe ọbụla ọ kwuru mana Mazị Ojo Akinsohun,nna nwatakịrị ahụ lara mụọ ji anya mmiri arịọ ndị uwe ojii ka ha ghara ikwe ka ndị gburu nwa ya laa okwu ahụ.
Previous Post: AHỊA/MMANYA
Next Post: EKWEREMADỤ KAGA-ABỤKWA OSOTE ONYEISI SINETI